चुपचाप कामरेड बुद्ध (हाइबुन) - समय-समाचार
प्रा. डा. भीम खतिवडा शनिबार, २०७८ असार १९ गते, ०७:२९ मा प्रकाशित
मन्दिरैमन्दिरको देश मेरो, आँगन–आँगनमा देवताहरू भेटिन्छन् । मानिस खान नपाएर मर्ला तर ठुसीठुसी पर सार्छौं हामी देवतालाई । दूध नपाएर नानी छट्पटाउलान्, गणेश बाबु ढुङ्गाका सँुढले दूधपानको स्वाँङ पारेर भक्तको भलो गरिरहन्छन् । अझ खास्सा कुरा त अर्को छ, देउता बनाउने देवबहादुर कामी उनकै हातले कँुदेको देवता बस्ने मन्दिर पस्नसम्म पाउन्नन् । अहह ! जन्माउन पाउने, अन्माउन पाउने अनि हेर्न चाहिँ नपाउने भए बाबा–आमाले कति सन्तति जन्माउँदा हुनन् नि ! ‘कलाकर्मीहरू देशका गहना हुन्’ नेता खोकिरहेछन् र त फुकालेर थन्क्याइदिन्छन् कामका बेला । गहना हैनन् कलाकर्मी –देशका हात हुन्, खुट्टा हुन्, टाउको र पेट हुन्— साँच्चै सुन्छौ भने त तिनीहरू समय, समाज र विवेकका जेट हुन्— खै, कहिले आउला यसो भन्ने चेतना । अझ मसिनोगरी भन्दा त सर्जक र कलाकर्मीहरू विचारका वाहक हुन्— रूपमा सार खिच्ने, अक्षरमा अमरता सिँच्ने र आस्थामा आकाश नाप्ने देशका जीवित सगरमाथा हुन् कलाकर्मीहरू ।
विवेकी आँखा देख्छ
नेताहरू र सरकारहरूले साहित्य, कला सङ्गीतजस्ता संस्कृतिका अजम्बरी शक्तिलाई चिनेकै दिन यो मुलुक समृद्धिको चुलीतिर लाग्नेछ अवश्य ।
एक्ले म र मेरा पछिल्तिर सुतिरहेका बुद्धका बीचमा आ–आफ्नै मनमा यस्तै विचार विमर्श भइरह्यो भटभटेमा । छविगृहमा छुटेछन् उनी सायद ! ‘साथी भेटेसि बिर्सिस् नि !’ भने हुनन् उनले । मैले तिनलाई फेरि मुसारेँ मायाले । उनी विश्वदीप, आफू परियो धरानको धिपधिप । अघिल्लो साँझ अविनाश कलागृहमा उनका लागि मैले निकै सोच्नु परेथ्यो ।
देउताहरूको किनबेच अपरिहार्य बन्दोरहेछ मायामा । मैले भेटेँ सहस्र बुद्धहरू । बुद्धका बारीमा लटरम्म देखिए बुद्धहरू । कोही गम्भीर, कोही स्मितवदन । मलाई एकफुट अग्लाइको फुटीकान्ते बुद्धले तानेकै हो । म थर्कमान् बन्नु परेन, हर्कमान सरले ‘ओके सर !’ भन्नासाथ म पनि हर्कप्रसाद बनिहालेँ । आसन चम्काउन लगाएर मैले धराने बुद्धका ‘मालिक’ उमेशलाई सोधेंँ— ‘कति पैसामा बुद्ध मलाई दिने त साथी ?’
थरीथरी बुद्धहरूका बीचबाट सयकोरीमा पाइए फुटे–बुद्ध जब, तब खुसी हुँदै तिनको कुशलताका लागि असल कर्गज चर्मबन्दको बन्दोबस्ती गरियो । वैशाख २६ को साँझ सातबजे जीवनमै पहिलोपटक बुद्धलाई बन्दी बनाएर स्वागारमा राखेथेँ । उसो त राते, पाते, ध्वाँसे, चुन्द्रे, मुन्द्रे, ढुङ्ग्रे आदि अनेकवलीका लिटिल बुद्धहरूको ‘प्रतिनिधिसभा’ नै हो मेरो घर पनि, तर आजका बुद्ध नानी–बुद्ध होइनन् श्रीपेचयुक्त स्टेन्ड–सत्तामा बसेका फुटे–बुद्ध पो हुन् त ! उनी रातभरि सुते एक्लै । बिहानै भेट भइहाल्यो, अनि मिलेर चम्पट ठोक्यौँ ।
बोल्ने ठाउँमा कसैले पित्तलको पाताले मोरिदिएथ्यो, कलाकार भएर । बेखबर प्रिय बुद्ध आँखा भएर पनि नभएका हुँदै जन्मिए । आधा शरीर त गुम्योगुम्यो, मुस्कानसमेत हात र छिनोले छिनिदिएपछि अब बोली, दृष्टि र समष्टि अबोल प्रतिमामा प्रतिमान छन् उनी ।
बेलबारीबाट सालघारीको बाटोहुँदै उर्लाबारीतिर लाग्दा नै मैले स्रष्टा रेखा सुवेदीजीलाई भनेथेँ— ‘मित्र, तपाईंले विशेष गरी कमरेड बुद्धको ख्याल गर्नुहोला । लामो यात्रामा बुद्ध कमरेडको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ । फतक्क एउटा अङ्ग पतन भयो भने यता कुनै नयाँ दन्तकाली, हस्तपाली, शिरस्थली बनाउन पनि सकिन्न त !’ साँच्चै कलिलो मुस्कानसँगै वहाँले स्नेहयुक्त हातले थप्थपाएर मेरो बुद्धलाई काखमा नै राख्नुभयो । आलोपालो घरको बिरालो भनेझैँ कहिले कमरेड बुद्ध बादलका काखमा पुग्थे त कहिले लेकाली हातमा अनि कहिले रेखाकै साथमा । हामी हाँस्दा बरु गुरु हाँसे तर बुद्ध हाँसेनन् । नेपाल छाडेर हामी कैलाशपथहुँदै जब भारतीय भूमिमा आँखाले टेक्दै कुद्दै थियौंँ —कमरेड देवता मौनमौन ।
मन हिँडेपछि जन्ती होस् कि मलामी उसलाई वास्तै हुन्न, जग्गे र घाटको । बाँचुन्जेलका काँचा रहरहरू न हुन् ः कहिले फिस्स हाँस्छन्, कहिले डाको छाडेर रुन्छन् । हाम्रै कल्पना र रहरहरूको कोकोहोलो मात्रै त हो नि ! हाम्रा देवताहरू बोल्दैनन्, पुजारीहरू झगडा गर्छन् । हाम्रा देवताहरू बेचिँदैनन्, ईखालुहरू दलाली गर्छन् । बुद्धहरू युद्ध चाहन्नन्, आडम्बरीहरू क्रुद्ध बन्छन् । पैसाका लागि आमासम्म बेच्ने आँट तिनका आँतमा मात बनेर चढेपछि के बाँकी रहला नि ! मेरो मन अहिले साथका प्रिय सहयात्रीहरूभन्दा पर पर पुगिरहेछ, जहाँ देवताका अनुहार बोकेर आमाबाहरू बगरमा गिट्टी कुटिरहेछन् । तिनकै ससाना लालाबालाहरू निगुरो सिला खोजिरहेछन् पेन्सिल र कापीका लागि । घाम कम्मरभन्दा माथि आउन लागेको यो बेला उसको यौवनभन्दा बढी मलाई असुरक्षित मेरै मुलुकका हजारौँ बेचिएका छोरीहरूका क्षतविक्षत यौनाङ्गबाट बगिरहेको रगतमा तैरिएको तिनका जीवनको चिन्ता किन बढिरहेको होला हँ !
छन् त दुरुस्तै, तर हैनन् बुद्ध । छन् त बुद्ध, तर छैनन् बुद्ध । आजका कमरेडजस्तै । सुन्दा समाजवादी, चिन्दा कमाउवादी ।
बोल्ने ठाउँमा कसैले पित्तलको पाताले मोरिदिएथ्यो, कलाकार भएर । बेखबर प्रिय बुद्ध आँखा भएर पनि नभएका हुँदै जन्मिए । आधा शरीर त गुम्योगुम्यो, मुस्कानसमेत हात र छिनोले छिनिदिएपछि अब बोली, दृष्टि र समष्टि अबोल प्रतिमामा प्रतिमान छन् उनी । छन् त दुरुस्तै, तर हैनन् बुद्ध । छन् त बुद्ध, तर छैनन् बुद्ध । आजका कमरेडजस्तै । सुन्दा समाजवादी, चिन्दा कमाउवादी । विधाताका हातले नै बिगार्न सक्छ आस्थाको स्वरूप । नाक लामो, नाक थेप्चो, ललाट विस्तीर्ण र सङ्कीर्ण, मुहार आफूआफू जस्तो । आफ्नै बाबुबाजे जस्तो । आफ्नै कुलदेवता जस्तो । देखेकै जस्तो । लागेकै जस्तो ।
हो, अदृष्ट ईश्वरहरूका प्रतिमान बनेका प्रतिमाहरू यसैकारण मान्छेजस्तै भिन्न छन् ः आकार, आयाम, अनुहार र अवस्थामा । संसारले सुन्ने गरी कराइरहेका छन् प्रिय गायक धीरज राई ः ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल !’ बुद्ध ! इतिहासको ज्युँदो साक्ष्यले साबित गरिरहेको विषयमा पनि तिमीलाई कुन लोभले छिमेकीले बारम्बार आफ्नो भनाउन खोज्छ, लिम्पियाधुराजस्तै । सरकार ! यति गम्भीर विषयलाई हामी आलुतामाको तरकारीजस्तै बनाउन कति सिपालु छौँ नि !
साँच्चै, तपाईंले साँगाका अग्ला महादेवलाई नजिकैबाट हेर्नुभा छ कि छैन ? कस्को अनुहारसँग मिल्छ रे यी महादेवको अनुहार ?
हो, कलामा बोल्ने आस्था मात्र होइन सभ्यता पनि हो । मूर्ति फगत् माटो, ढुङ्गा र धातुहरूको सिपालुहाते अवतार मात्रै होइन, त्यो हाम्रो सांस्कृतिक वैभवको मानक पनि हो । खोलाबाट ढुङ्गाजसरी मन्दिर र गुम्बाबाट हाम्रा सभ्यताका निधिहरूसँग कस्तो पैसेसुख साट्छन् मान्छेहरू !
हाम्रो मुलुकमा यसरी नै सीमा नाघ्ने र माया बाँड्नेहरूसँग बुद्ध चुपचाप काखमा सवार छन् । हाम्रो कमरेड–सरकारसँग.छुट्टै बुद्ध, आज हामीसँग पनि छुट्टै बुद्ध कमरेड, हैन त रेखा कमरेड ?